Zinedine Zidane oo xiriir la sameenaya Eden Hazard’ | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Zinedine Zidane oo xiriir la sameenaya Eden Hazard’
Published on December 6, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(06-12-2017)Kooxda Real Madrid ayaa kor u qaadday dadaalkeedii ay ugu soo jiidan lahayd xiddiga Chelsea Eden Hazard oo laga doonayo in uu ku biiro kooxda Bernabeu, sida lagu sheegay warbixin maanta soo baxday.
Los Blancos ayaa la fahamsan yahay inay muddo dheer xiiseyneyso xiddiga reer Belgium, waxaana horeyba lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Stamford Bridge tan iyo markii uu kaga soo biiray Lille 2012kii.
Maalintii Isniinta waxaa la soo wariyay in Hazard uu ku riyoonayo in uu heshiis cusub u saxiixo Blues iyadoo rajeyneysa in kooxda reer Spain laga yaabo inay dhaqaaqaan, sida laga soo xigtay Diario Gol, tababaraha Zinedine Zidane ayaa la xiriiray 26 jirkaan toddobaadkii hore.
Bishii hore, Hazard ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay Chelsea, halka uu sidoo kale qirtay inuu “qiiro” u yahay Zidane.
Sikastaba Hazard waqtigan xaadirka ah waa boqorka garoonka Stamford Bridge wuxuu soconayaa heshiiskiisa ilaa 2020.